विमानस्थल तोडफोड प्रकरण: सांसद साहकी श्रीमतीसहितको समूह विमानस्थल छिरेर कसरी गर्‍यो प्रदर्शन ? | Ratopati
विमानस्थल तोडफोड प्रकरण: सांसद साहकी श्रीमतीसहितको समूह विमानस्थल छिरेर कसरी गर्‍यो प्रदर्शन ?
जनकपुर– जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एयरको चेक इन काउण्टरमा तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद प्रमोदकुमार साहलाई जिप्रका धनुषामा ल्याइएको छ । मंगलबार दिउँसो २ बजे काठमाडौंबाट उडेको बुद्ध एयरको विमानले डिले गरी बेलुका ४ः ३९ मा जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि सांसद साहले काउन्टरमा विवाद सृजना गरेका थिए ।
पक्राउ पूर्जी जारीपछि सांसद साह काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए । सांसद साहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा ल्याइएपछि राजपा कार्यकर्ताले जिप्रका धनुषा परिसरमा समेत प्रदर्शन गरेका छन् ।
राजपा नेपालले पक्राउ परेका साहलाई अबिलम्ब रिहाई नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै यस घटनाको निश्पक्ष छानविनका लागि माग समेत गरेको छ । राजपा धनुषाका संयोजक प्रमोद यादवले सांसद साहलाई अबिलम्ब रिहाईको माग राख्दै आफूहरु आन्दोलित भएको बताए । उनले बुधबार देखि चरणबद्ध आन्दोलनको तयारीमा रहेको समेत चेतावनी दिए । त्यस्तै, साहको समर्थनमा उनी निर्वाचित सर्लाहीमा समेत विरोध प्रदर्शन भएको छ ।